Mpandraharaha ny fonja Mitohy anio ny fitokonana
Tsy nisy ny fanaterana voafonja teny amin’ny fitsarana ary tsy nisy koa ny fandraisan’ireo mpandraharaha ny fonja voafonja vaovao, raha ny fampitam-baovao omaly, noho ny fisian’ilay fitokonana fanairana notontosain’izy ireo tetsy Antanimora omaly.
Fampitaovan’ny CLD any Morombe Lasa propagandin-dRajoelina ?
Miantso ny manampahefana manomboka amin’ny filoham-pirenena, antenimieram-pirenena, lehiben’ny faritra, indrindra ny Bianco mba hanara-maso ny vola sy fitaovana amin’ny alalan’ny CLD (Komitim-paritry ny fampandrosoana) ny fikambanan’ireo ben’ny tanàna 9 any amin’ny distrikan’i Morombe.
Mpiasam-panjakana ambony Misy tsy faly amin’i Maharante Jean de Dieu
Tratry ny tsindry avy amin’ireo mpiasam-panjakana ambony nahavita fianarana tao amin’ny sekoly manofana ho mpiasam-panjakana na ny ENAM ny minisitry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy Maharante Jean de Dieu ankehitriny noho ny resaka fanendrena olona.
Takaitran’ny rivodoza Eliakim Tafiakatra 17 no maty
Miisa 15.772 ireo naratra ary 17 ireo namoy ny ainy raha toa ka 600 ireo olona tsy manan-kialofana tsy fidiny vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim teto Madagasikara ny faran’ny herinandro teo. Tena voa mafy ny ilany avaratra sy atsinanan’ny nosy.
Fifaninanana « I Love You Madagascar » Mpandray anjara 12 isa no nivoaka ho mpandresy
Nampahafantarina ny mpanao gazety omaly tetsy amin’ny minisiteran’ny fizahantany ny vokatr’ilay fifaninanana entina hampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto amintsika, nampitondraina ny lohateny hoe : « I Love You Madagascar ».
dia anisan'ny natrehan'ny birao sy ny filohan'ny holafitry ny mpanao gazety niarovana ireo mpanao gazety namana maromaro teny amin'ny mpitandro ny filaminana na fampanoavana sy ny fitsarana noho izy ireo nisy nitory tamin'ny fanatanterahany ny asany (délit de presse), hoy ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety, Gerard Rakotonirina, no azo amintinana ny tontolo niainan’ny asa fanaovan-gazety tamin’ity taona ity. Notsiahiviny fa resaka fanalam-baraka an-gazety na fanelezana vaovao tsy marina no nitoriana ireny mpanao gazety narovan'ny holafitra ireny.Anisan'izany ny raharaha nitorian'ilay mpandraharaha eo amin’ny tontolon’ny andramena izay nisy nitana an-keriny ny zanany mianadahy. Notorian’io mpandraharaha io ny mpanao gazety sy ny talen'ny famoahana ny gazety 'Zay Zany sy Malaza. Teo ihany koa ny raharaha nitorian'ny orinasa Samada ny gazety La vérité sy Madagascar Matin sy ny resaka raharaha tany Ambatondrazaka. Ankoatra izay dia nanamarika iny taon-dasa iny ihany koa ny fikarohana vahaolana momba ny fanitsahana onja nataon'ny haino aman-jery ny fréquences ASECNA tany Mahajanga sy ny fidirana an-keriny nataona depiote iray tao amin'ny haino aman-jery tsy miankina izay nanohintohinana ny asa fanaovan-gazety. Tao koa ny olan'ny mpanao gazety tany Taolagnaro momba ny fanendrikendrehan'ny mpitondra any an-toerana ho tsy mamoaka vaovao raha tsy omena vola ... Ankoatra ireo ny olana madinika tsy mampitovy hevitra ny manampahefana any amin'ny faritra amin'ny vaovao mitombina avoakan'ny mpanao gazety. Teo ihany koa ilay lahatsoratra mahakasika ny minisitry ny polisy izay nampiantsoana ny mpanao gazetin’ny Midi Madagasikara ny volana oktobra teo.Sarotra ny niainana ny tontolon'ny asa na nalalaka aza ny asa fanaovan-gazety noho ireo endrika teritery na avy amin'ny mpampiasa na ireo mihevitra ho manam-pahefana kely, hoy hatrany ny filohan’ny holafitra. Ny Traikefa azon'ny mpanao gazety tamin'ireo fihaonana an-tampony (francophonie, UPF sy Comesa) kosa dia azo ambara ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny mpanao gazetintsika, indrindra ireo tanora tsy nandrakotra fihaonana lehibe toy ireny, dia heverina fa hanampy ny mpanao gazety hiasa matihanina kokoa